1 Samuel 7 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
7 Ndị Kiriat-jierim+ wee bịa buru igbe Jehova gbagoo wee buba ya n’ụlọ Abinadab+ nke dị n’ugwu, ọ bụkwa Elieza nwa ya ka ha doro nsọ ka ọ na-eche igbe Jehova nche. 2 Igbe ahụ wee dọrọ na Kiriat-jierim ruo ọtụtụ ụbọchị nke na o ruru afọ iri abụọ, ụlọ Izrel dum wee na-etiku Jehova mkpu ákwá.+ 3 Samuel wee gwa ụlọ Izrel dum, sị: “Ọ bụrụ na unu ji obi unu niile na-alọghachikwute Jehova,+ wepụnụ chi ndị mba ọzọ ndị dị n’etiti unu+ nakwa ihe oyiyi Ashtọret,+ meekwanụ ka obi unu dum dịrị n’ebe Jehova nọ, jeekwaranụ naanị ya ozi,+ ọ ga-anapụtakwa unu n’aka ndị Filistia.”+ 4 Ụmụ Izrel wee wepụsịa Bel+ na ihe oyiyi Ashtọret+ ma malite ijere naanị Jehova ozi. 5 Samuel wee sị: “Kpọkọta Izrel dum+ na Mizpa,+ ka m kpekuo Jehova ekpere+ n’ihi unu.” 6 E wee kpọkọta ha na Mizpa, ha wee na-esere mmiri ma na-awụpụ ya n’ihu Jehova, buokwa ọnụ n’ụbọchị ahụ.+ Ha wee malite ikwu n’ebe ahụ, sị: “Anyị emehiewo Jehova.”+ Samuel wee na-ekpe ụmụ Izrel ikpe+ na Mizpa. 7 Ndị Filistia wee nụ na ụmụ Izrel ezukọtawo na Mizpa, ndị isi+ ndị Filistia wee gbagoo ibuso Izrel agha. Mgbe ụmụ Izrel nụrụ ya, ha malitere ịtụ egwu n’ihi ndị Filistia.+ 8 Ụmụ Izrel wee gwa Samuel, sị: “N’ihi anyị, agbachila nkịtị wee ghara ịkpọku Jehova Chineke anyị ka o nyere anyị aka+ wee zọpụta anyị n’aka ndị Filistia.” 9 Samuel wee were nwa atụrụ ka na-aṅụ ara chụọrọ Jehova àjà nsure ọkụ, bụ́ àjà a na-esurecha n’ọkụ;+ Samuel wee malite ịkpọku Jehova ka o nyere Izrel aka,+ Jehova wee za ya.+ 10 O wee ruo na ka Samuel nọ na-achụ àjà nsure ọkụ ahụ, ndị Filistia rutere nso ibuso Izrel agha. Jehova wee mee ka égbè eluigwe nke dara oké ụda+ gbaa n’ụbọchị ahụ, o wee tinye ndị Filistia n’ọgba aghara;+ Izrel wee merie ha.+ 11 Ụmụ Izrel wee si na Mizpa mapụta chụwa ndị Filistia, wee gburu ha ruo na ndịda Bet-kaa. 12 Samuel wee buru otu nkume+ guzobe n’agbata Mizpa na Jeshana ma gụọ ya Ebeniza. O wee sị: “Jehova enyeworo anyị aka ruo ugbu a.”+ 13 E wee si otú a merie ndị Filistia, ha abataghịkwa ọzọ n’ókèala Izrel;+ aka Jehova wee na-emegide ndị Filistia ụbọchị niile nke Samuel.+ 14 Izrel wee na-enwetaghachi obodo niile ndị Filistia naara ha malite n’Ekrọn ruo Gat, Izrel napụtakwara ókèala ha n’aka ndị Filistia. Udo wee dị n’etiti Izrel na ndị Amọraịt.+ 15 Samuel wee na-ekpe Izrel ikpe ụbọchị niile nke ndụ ya.+ 16 Ọ na-emekwa njem site n’afọ ruo n’afọ, na-agazu Betel+ na Gilgal+ na Mizpa+ dum ma na-ekpe Izrel ikpe+ n’ebe ndị a niile. 17 Ma ọ na-alọta na Rema,+ n’ihi na ọ bụ n’ebe ahụ ka ụlọ ya dị, ọ bụkwa n’ebe ahụ ka ọ na-anọ ekpe Izrel ikpe. O wee wuoro Jehova ebe ịchụàjà n’ebe ahụ.+